Toerana Thuja: fipetrahana, fitsaboana, fiompiana
Thuja dia solontenan'ny gymnosperma conifers avy amin'ny fianakaviana Cypress. Amin'ny zavaboahary dia mitombo ho 7-12 metatra ny haavony. Ny tanindrazany dia heverina ho an'i Japana sy Amerika Avaratra. Ity trano ity dia tonga lafatra toy ny fanomezam-pahasoavana na toy ny fanokafana ny fialantsasatry ny Taom-baovao. Avy amin'ny tokantrano tokana tokana no kely indrindra mitaky ary haharitra anao mihoatra ny herintaona.
Rowan - hazo na kirihitr'ilay foko Apple Tree izay an'ny fianakaviana Rosaceae. Misy karazany 100 mahery ny lavenona, ny faritra famokarana zavamaniry dia Eoropa, Azia ary Amerika Avaratra. Scarlet Rowan Large Tazo tsara tarehy iray na kirihitra miaraka amina varavarankely mamelatra satroboninahitra maranitra maranitra, fotodrafitrasa matevina, mahatratra 5-10 m amin'ny haavony
Famaritana sy sarin'ireo karazam-bibikely malaza indrindra
Willow - hazo hazo na tsilo, izay mitombo indraindray amin'ny toetr'andro. Misy karazana sasany any amin'ny tany tropikaly ary any ivelan'ny Faritra Arktika. Ny mpikaroka dia nahita sarina ravin-kisoa tamin'ny sedra efa tranainy efa ho zato taona maromaro. Efa ela i Willow no nampiasaina ho toy ny orin-jiro, ny karazana toho-tantely malaza indrindra dia hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity.